Ankohonana Masina - Wikipedia
Ny Ankohonana Masina, sary nataon' i Juan Simón Gutiérrez.
Ny Ankohonana Masina dia ahitana an' i Jesoa Zazakely sy i Maria Virjiny ary i Masindahy Jôsefa. Nanjary nalaza teo amin' ny zavakanto io lohahevitra io nanomboka tamin' ny taona 1490, fa ny fanomezam-boninahitra ny Ankohonana Masina dia natomboka tamin' ny fomba ôfisialy tamin' ny taonjato faha-17 nataon' i Saint François de Laval, eveka voalohany tao Nouvelle-France, izay nanangana fiombonana.
Ny Fetin' ny Ankohonana Masina dia fankalazana litorjika ao amin' ny Eglizy Katôlika, ary koa any amin' ny fiangonana loterana sy anglikanina maro, ho fanomezam-boninahitra an' i Jesoa sy ny reniny ary ny raikeliny, Masindahy Jôsefa, amin' ny maha ankohonana azy; izany dia voamarika nanomboka tamin' ny taona 1921 rehefa nampidirin' ny Papa Benoà XV. Ny tanjona voalohany amin’ ity fety ity dia ny fanolorana ny Ankohonana Masina ho modely ho an’ ny fianakaviana kristiana. Betsaka ny trano fiangonana natokana ho an' ny Ankohonana Masina.
Ny Filazantsara dia miresaka kely momba ny fiainan’ ny Ankohonana Masina tamin’ ireo taona talohan’ ny fanompoan’ i Jesoa ampahibemaso. I Matio sy i Lioka dia mitantara ireo fizaràn-tantara tamin' ny vanim-potoana niainan' i Kristy, dia ny famorana azy sy ny fanolorana azy tao amin' ny Tempoly taty aoriana, ny fandosirana nankany Ejipta, ny fiverenana tany Nazareta, ary ny fitadiavana azy tao amin' ny Tempoly. Toa Jiosy nitandrina tsara i Jôsefa sy Maria, araka ny fitantaran’ i Lioka, fa nitondra an’ i Jesoa niaraka taminy tamin’ ny fivahiniana masina fanao isan-taona tany Jerosalema niaraka tamin’ ny fianakaviana jiosy hafa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ankohonana_Masina&oldid=1042468"
Voaova farany tamin'ny 25 Desambra 2021 amin'ny 11:23 ity pejy ity.